Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle oo booqday deegaano ay fatahaaduhu saameeyeen - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle oo booqday deegaano ay fatahaaduhu saameeyeen
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Gobolledka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday deegaano ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku yaal degmada Mahaday ee gobolka Sh/dhexe.
Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa warbixino ka dhagaystay qaar kamid ah mas’uuliyiinta maamulka degmada Mahaday oo uu ka mid yahay guddoomiyaha degmada Mahaday Axmed Xuseen Afrax isagoo ugaga warbixiyay xaalada fatahaada iyo bulshada Ku go,doonsan deegaanada qaar ee ay biyuhu go’odoomiyeen.
Wafdiga uu horkacayay Madaxweyne ku xigeenka oo gudaha u geli waayay deegaanada ay ku sugan yihiin shacabka fatahaaduhu saameeyeen.
Hase yeeshee Madaxweyne ku xigeenka Hishabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa saxaafada duleedka deegaanka Buurfuule ayaa ku baaqay in gurmad deg-deg ah ay u baahan yihiin shacabka ay fatahaaduhu saameeyeen.
Kumanaan qoys ayaa waxaa uu saameyn ku yeeshay fatahaado ka jira deegaano ka mid ah gobolka Sh/dhexe.
booqashada madaxweyne ku xigeenka hirshabelle cali guudlaawe